Natomboka ny ady amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana ho an'ny olona 380 000 tany atsimo atsinanana
07 Aogositra 2020
Ny Ambasadaoron’i Korea dia nitsidika sekoly sangany iray amin'ny lafin’ny fanajana ny fidiovana ao amin'ny kaominina ambanivohitra Ambohidrova, Manakara izay nahazo ny fanampiana avy amin’ny UNICEF
MANAKARA, 31 Janoary 2020: Ny tetik'asa "fanafainganana ny fahazoana rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana amin'ny alàlan'ny fomba fiasa manome vahana ny vondrom-piarahamonina eto Madagasikara" dia mikendry ny hanatsarana ny toe-pahasalamana sy ny fahaveloman'ny olona miisa 380 000 ao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana.
Natomboka androany tany Manakara ity tetik’asa mitentina 2,5 tapitrisa dolara ity, izay novatsian'ny Sampan-draharaha Koreana misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena (KOICA) vola, ary ampiharin’ ny UNICEF. Izany tetik’asa izany dia mikendry ny tanàna miisa 41 any amin'ny faritra roa izay hiady amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana. Anisan’ny tanjona amin’izany ihany koa ny hampaharitra ny vokatra azo, amin’ny alàlan'ny fanadiovana tanteraka izay tanterahan’ny vondrom-piarahamonina, ny fanadiovana miorina amin'ny tsena, ny tetik’asa WASH any an-tsekoly sy eny anivon’ireo tobim-pahasalamana fototra ary ny fampiroboroboana ny fitantananana ny fidiovana mandritry ny fadim-bolana.
Amin'ny alàlan'ity tetik’asa ity, vehivavy miisa 190 000 sy ankizy 190 000, izay ahitana zaza 10 000 mandeha any an-tsekoly no hisitraka ny fanatsarana ny fahasalamany sy ny fivelomany. Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana dia anisan'ireo faritra manana tahan’ny fanaovana maloto ankalamanjana avo indrindra: maherin'ny 2 amin'ny olona 3 no mbola manao io fomba io, izany hoe olona miisa 1,7 tapitrisa. Araka ny vokatry fanadihadiana ara-tsosialy ho an’ny mponina eny anivon’ny tokontrano (MICS) 2018 natao farany, latsaky ny iray isan-jaton’ny mponina any amin'ireo faritra 2 ireo no misitraka rano fisotro madio, fanadiovana ary fidiovana. Ankoatr'izay, mbola ireo ihany koa no faritra tena ratsy indrindra amin'ny lafin’ny fanasan-tanana amin'ny savony: 5,7% fotsiny (V7V) ary 4.2% (AA)n’ny tokantrano no manana fitaovana fanasan-tanana miaraka amin'ny savony sy rano, raha toa ka 23,0% ny salan’isa manerana ny nosy.
Izany toe-javatra izany dia misy fiantraikany amin'ny fahampian-tsakafo ara-pahasalamana eo amin’ny mponina ao amin'ireo faritra roa ireo, izay matetika tratran'ny loza voajanahary toy ny rivodoza sy haitany. Izany no nitarika ny fanohanan'i Korea amin'ny alàlan'ny KOICA, izay nanao sonia fifanarahana niaraka tamin'ny governemanta malagasy sy ny UNICEF tamin'ny volana septambra 2019. Io fiaraha-miasa io dia hahafahana mampiditra ao anatin’ny fandaharan'asa misahana ny fanadiovana eo anivon’ny UNICEF, kaominina vaovao miisa 30 ary kaominina 11 izay efa nanafoana ny fanaovana maloto ankalamanjana. Izany no natao dia mba hiantohana ny faharetan'ny vokatra azo sy hanohanana ireo ankohonana mba hahafahan’izy ireo miakatra eo anivon’ny antanatohatra eo amin’ny lafin’ny fanadiovana.
Talohan'ny lanonana dia nitsidika ny tanànan'i Ambohitrova ireo tompon’andraikitra isanisany nanatrika tao; anisan’izany ny Ambasadaoron’i Korea, LIM Sang-woo, ny solontenan'ny Minisitry ny Rano, Fidiovana ary Fahadiovana, ary ny solontenan'ny UNICEF, Michel Saint-Lot. Ambohitrova tokoa mantsy dia kaominina sangany ao anatin'ny ady amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana amin'ity faritra ity, nohon’ny fidiran’ny UNICEF an-tsehatra. Nandritra ny lahateny nataony, ny Ambasadaorin’ny Repoblikan’i Korea dia nanamafy fa "i Korea Atsimo, amin'ny alàlan'ny KOICA sy ny fanohanana natolony an’ny UNICEF, dia faly tokoa mandray anjara ary manome fitaovana hanatanterahana ny tanjona napetraky ny governemanta malagasy eo amin’ny sehatry ny fahazoana rano fisotro madio sy fanadiovana. Satria i Korea dia firenena nandia olana mitovy amin’i Madagasikara vao tsy ela akory izay, teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana, dia vonona izy hizara amintsika ny traikefany ary hiara-hiasa amin'ireo manampahefana eto amin'ny firenena mba hanatanterahana ny fisandratan’i Madagasikara."
Eo amin’ny fanatanterahana ny asany, ny UNICEF dia hiantehitra amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpisehatra eo an-toerana ho fandraisana anjara amin'ny toekarena eny ifotony ary koa hivarotana ireo fitaovana mafy kokoa izay mahatohitra ny loza voajanahary mety hitranga. Ireo mpandraharaha eny an-toerana no hiantoka ny famarotana sy fametrahana ireo lava-piringa nohatsaraina. Mikasika ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana, vondrom-behivavy maromaro no hiasa eo amin’ny sehatry ny fanamboarana sy fivarotana lamba fampiasa amin’ny fadim-bolana azo sasana.
"Ankehitriny dia manana tondrozotra ho an’ny firenena isika, izay mitarika antsika eo amin’ny fahatratrarana ireo tanjona napetraka isam-paritra eo amin’ny sehatry ny fanadiovana. Ny UNICEF miaraka amin'ny fanohanan'ny KOICA dia vonona ny hanohana ny governemanta hiatrehana izao fanamby lehibe izao. Miroso amin’ny asa isika izao hahafahana miara-miasa amin'ireo mpitarika, reny, mpampianatra, dokotera ary ankizy ao amin'ny kaominina 41, enti-miantoka hoavy ara-pahasalamana eo anivon’ny fiaraha-monin," hoy i Michel Saint-Lot, solontenan’ny UNICEF eto Madagascar.
Ny fahazarana dia miova eo anivon’ny vondron'olona, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’i Sarah sy Perlin izay misasa tànana hatrany rehefa avy mandeha any amin'ny lavi-piringa izy ireo.
Pélagie RAVELOARISOA, mpitarika ny fikambanan'ny vehivavy “Mahatsinjo ao Vondrozo Farafangana” dia manamafy fa namorona tany fambolena voankazo izy ireo teo amin'ny toerana izay nahazatra ny mponina hanaovana maloto teo aloha. Nahazo vokam-pambolena tsara ny fikambanana tamin’izany.